Mhemberero-shandira pamwe neRUKANG fekitori yemawiricheya uye vanofamba
Nomufaro kupemberera kushandira pamwe kweHongzhu yezvokurapa uye Rukang kusaina zvibvumirano pamasiricheya kugadzira. Iwo anotungamira kubva kumapato ese maviri, Mr. Yang uye Mr. Lv vanoenda kuwo uye vanovimbisa vanoedza nepavanogona napo kutsigira zvibvumirano zvakasimba. Kubva zvino zvichienda mberi, vaHongzhu vezvokurapa vanogona kuendesa mawiricheya uye hemiplegic vanofamba nehunyanzvi hwefekitori nemitengo yemakwikwi pamusika. Chaiwo mavhiri emavhiri anogona kupa sezvo,
Chinhu chakanyanya kukosha chekutarisisa paunosarudza pawiricheya ndiko kukura kwewiricheya. Nzvimbo huru dzekutakura huremu kune vashandisi vemavhiri dzaive dzakatenderedza ischial tubercles, kutenderedza femur, kutenderera kweYang uye kutenderedza pfudzi. Ukuru hwewiricheya, kunyanya hupamhi hwechigaro, kudzika uye kukwirira kwemashure emhosva, uye kureba kuri pakati pechitsiko chetsoka nechigaro chechigaro, zvese zvinokanganisa kutenderera kweropa kwezvikamu zvevapfuuri, uye kukonzera kukakavara kweganda, kunyange kumanikidza maronda. Uye zvakare, kuchengetedzeka kwemurwere, kugona kushanda, uremu hweyairi, nzvimbo yekushandiswa, kutaridzika uye dzimwe nyaya dzinofanira kufungwa nezvazvo.
(1) Chigaro chakapamhama: kuyera kureba pakati pemaviri kana mana kana maviri tara paunogara pasi. Wedzera 5cm, uye pachave ne2,5cm pagate pamativi ese mushure mekugara pasi. Chigaro chakatetepa, saka zvakaoma kusimuka nekudzikisa vhiri. Chikamu chepamusoro uye chidimbu chematehwe chakadzvanywa. Kana chigaro chakawandisa, hazvisi nyore kugara wakagadzika. Hazvisi nyore kushandisa wiricheya. Makumbo ari nyore kupera simba. Zvakaomawo kupinda nekubuda gedhi. (2) Kureba kwechigaro: kuyera kureba kwehure pakati pehure buttock uye necrus gastrocnemius tsandanyama paunogara pasi, uye kuderedza chiyero chinosvika 6.5cm. Kana chigaro chiri chipfupi, uremu hwemuviri uchanyanya kuwira pane ischium, iri nyore kukonzera kumanikidza kwakanyanya munharaunda yemunharaunda; kana chigaro chakareba kwazvo, chinomanikidza chikamu chekuparadzanisa, kukanganisa kutenderera kweropa remunharaunda, uye kukurudzira nyore nyore ganda munzvimbo yemuno. Kune varwere vane pfupi pfupa kana mashoma knee flexion contracture, zviri nani kushandisa pfupi seat. (3) Kureba kwechigaro: kuyera chinhambwe kubva chitsitsinho (kana chitsitsinho) kuenda kudendere kana akagara pasi, wedzera 4cm, uye isa tsoka pasi peinosvika 5cm kubva pasi. Kana chigaro chakakwira kwazvo, vhiri rengoro harigoni kupinda patafura; kana chigaro chakaderera, huremu hwe pfupa rakagara hwakanyanya. (4) Kureba kweArmrest: kana akagara, ruoko rwekumusoro rwakamire, uye ruoko rwemberi rwakaiswa panjanji. Kuyera kukwirira kubva pachigaro pamusoro kusvika kune rakadzika pamucheto wemberi, pamwe ne25cm. Yakareba ruoko armrest inobatsira kuchengetedza rakakodzera muviri uye kudzikama, uye inoita kuti kumusoro makumbo riiswe munzvimbo yakasununguka. Iyo handrail yakanyanya kukwirira, uye ruoko rwekumusoro runomanikidzwa kusimudza, iyo inowanzo kukaka kutiza. Kana ruoko rwekurwiswa rwakanyanya, iwe unofanirwa kusendamira mberi kuti urambe wakasimba. Haisi chete kupusa kuneta, asi zvakare inogona kukanganisa kufema.
Nguva yekutumira: Mar-20-2019